Fumed Silica FST- 150 လက်ကား၊ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းအတွက် Pyrogenic Silica၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ Fuhsite
Fumed Silica FST- 150- P အတွက် Pyrogenic Silica
Fushite မှ Fumed Silica FST- 150 ကော်နှင့်ကော်များအတွက် ...
မြင့်မားသောပွင့်လင်းသောအရည်အသွေးမြင့်အစိုင်အခဲ HTV silicone ဆီပွတ် ...
မြင့်မားသောပွင့်လင်းသောဆီလီကွန်ရော်ဘာ Fumed စီလီကွန်ရော်ဘာ
Fumed Silica FST- 150- ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အရောင်တင်ခြင်းအတွက် Pyrogenic Silica၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ ကော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းများ
CAS နံပါတ်: 112945-52-5
EINECS အမှတ် ။၂၁၅-၆၈၄-၈
မူရင်းဒေသ: Zhejiang, China
ပုံပန်းသဏ္ာန်: White Nano-Scaled Powder
လျှောက်လွှာ: ပုံနှိပ် & မှင်; အပေါ်ယံပိုင်း; Sealants များ၊ ရာဘာ၊ ပုံနှိပ် & မှင်; အပေါ်ယံပိုင်း; Sealants များ၊ ရာဘာ
သတ်မှတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ (BET): ၁၅၀ ± ၂၅
4% ပျံ့နှံ့မှု၌ pH: 4.0-4.5
အခြောက်ခံခြင်း (၁၀၅ ℃တွင် ၂ နာရီ): ≤2.0%
စက်နှိုးခြင်း (၁၀၀၀ ဒီဂရီတွင် ၂ နာရီ) ဆုံးရှုံးခြင်း: ≤2.5%
ဆန်ခါလက်ကျန် (45μm): ≤250mg/kg
ဆီလီကာ ပါဝင်ပစ္စည်းများ (မီးလောင်နေသောအရာများ): ≥99.8%
Tamped သိပ်သည်းဆ (105 at မှာ2နာရီ): 40 ~ 60g/dm2
FST-150 သည် 150 m2/g ပတ်လည်မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်းရှိ hydrophilic fumed silica ဖြစ်သည်။
ဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့်အခြား elastomers များ
Adhesives & Sealants များ
* elastomers များတွင်အားဖြည့်အားဖြည့်ဆေး
* Anti-settling, anti-sagging and thickening agent တို့ဖြစ်သည်
* Rheology ထိန်းချုပ်မှုနှင့် thixotropic အေးဂျင့်
10kg/အိတ်; အဖြူရောင် kraft စက္ကူအိတ်၊
20 GP အတွက် 2200kg ကုန်များကို 10 pallets, 22bags/pallet
40 GP အတွက် ၂၄၀၀ ကီလိုဂရမ်ထုတ်ကုန်များကို pallets ၂၀၊ ၂၂ အိတ် /pallet
HQ ၄၀ အတွက် ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်ထုတ်ကုန်များကို pallets ၂၀၊ ၂၄ အိတ်/pallet
၁။ မင်းကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်သူလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ကျွန်ုပ်တို့သည် fumed silica ကိုနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာသုတေသနလုပ်ပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးတည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ fumed silica ကိုထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
Fumed silica ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မီးလျှံတို့တွင် silicon tetrachloride pyrohydrolysis ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကုန်ကြမ်းသည် silicon tetrachloride ဖြစ်သည်။
3. အဓိက applications များကဘာလဲ။
Fumed silica ကို HTV၊ RTV၊ အီလက်ထရောနစ်အရည်ကော်များ၊ ကော်များ၊ defoaming အေးဂျင့်၊ မှင်နှင့်အပေါ်ယံပိုင်း၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများ၊ လယ်ယာသုံးဓာတု၊ တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်း၊ ပန်းချီကားများစသည်ဖြင့်အဓိကအသုံးပြုသည်။
၄။ fumed silica ၏ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
fumed silica ကို filler သို့မဟုတ် additives အဖြစ်သုံးသောအခါ၎င်းကိုထူခြင်း၊ အားဖြည့်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း၊ free-flow, thixotropy, dielectric properties, anti-settling, heat insulation နှင့် anti-sagging တို့ကိုကူညီသည်။
၅။ အခြားထုတ်လုပ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ သင်၌အားသာချက်များကားအဘယ်နည်း။
အရည်အသွေးတည်ငြိမ်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Zhejiang တွင်ထုတ်လုပ်သည့်လက်မှတ်ကိုတရုတ်ပြည်တွင်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးစံနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသောစံ T/ZZB 1420-2019 ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူ - ကျွန်ုပ်တို့၏ hydrophilic ထုတ်ကုန်၏နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှုသည်တန်ချိန် ၈၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဦး ဆောင်အာဏာပိုင်： ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆီလီကွန်လုပ်ငန်းတွင်သြဇာကြီးမားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
Hydrophilic အဆင့်: FST-150/FST-200/FST-380/FST-430
စျေးနှုန်းသည်အမှန်တကယ်အတန်းပေါ်မူတည်သည်။ ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းအတက်အကျရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းကိုညှိနိုင်ပါသည်၊ အော်ဒါမတင်မီစုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
အဓိကအားဖြင့် T/T, L/C နှင့် D/P, အမှန်တကယ်ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များမှာယူသည့်အခါအရောင်းနှင့်စစ်ဆေးပါ။
ထုတ်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားနှင့်အခြေအနေအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းပို့ဆောင်စီစဉ်ပေးပါမည်။ သင်္ဘောအချိန်ဇယား (သို့) အခြားအချက်များကြောင့်အော်ဒါတင်သောအခါရောင်းအားနှင့်စစ်ဆေးပါ။
ယခင်: Fushite မှ Fumed Silica FST- 150 သည်ကော်နှင့် sealant များအတွက်ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: FST-200 HYDROPHILIC FUMED SILICA
Aerosil မှုတ်ထားသော Silica
Amorphous Silica အမှုန့်
Amorphous Silica Powder ကိုအသုံးပြုသည်
Amorphous Sio2 Silica Powrder ဖြစ်သည်
Fumed Silica Applications များ
မှိုင်းနေသော Silica Cabosil
မှိုင်းနေသော Silica Español
ကွန်ကရစ်တွင် Fumed Silica
Fumed Silica အမှုန့်
မှိုင်းခံထားသော Silica Sigma Aldrich
Fumed Silica ကိုသုံးသည်
Silica Aerosil ၂၀၀
Silica Pyrogenic ဖြစ်သည်
Fumed Silica ကိုကုသခဲ့သည်
Cabosil Eh5 Fumed Silica အစားထိုးအစားထိုးဖူ ...
Fushite Fumed Silica
Fushite မှို Silica FST-200
Hydrophilic မှေးထားသော silica FST-380 nano အမှုန့်ကို ...
Hot Products များ, Sitemap Aerosil 200 Fumed Silica, Amorphous Fumed Silica, Aerosil မှုတ်ထားသော Silica, Hydrophilic Fumed Silica,